AC Milan oo ka walaacsan dhibaato kale oo kasoo gaartey kulankii shalay looga badiyay – Gool FM
AC Milan oo ka walaacsan dhibaato kale oo kasoo gaartey kulankii shalay looga badiyay
Raage January 30, 2017
(Milano) 30 Jan 2017 – Waxaa jirta cabsi soo wajahdey kooxda AC Milan oo ka walaacsan inay dhaawac dheer ku waydo laacibiinta Mattia De Sciglio iyo Giacomo Bonaventura kuwaasoo maqnaan kara ilaa 2 bilood.
Labada laacib waxay shalay ku wada dhaawacmeen kulankii ay 2-1 kaga adkaatay kooxda Udinese, iyadoo Bonaventura uu u muuqdey nin uu haleelay dhaawac muruqa ah, iyadoo ay baarista hordhaca ihi muujinayso inuu ugu yaraan 2 bilood maqnaan doono.
Dhanka De Sciglio, waxaa gadaal si xun uga raacday Rodrigo De Paul, oo ka waxyeelleeyay anqowga midig, waxaana saaka la arkayay isagoo imanaya Milanello clinic isagoo adeegsanaya biraha jiisaska iyo jeeso wayn oo lugta uga xirnayd, taasoo muujinaysa inay ama seedaha wax ka gaareen ama uu jab jiro.
Kooxd Rossoneri ayaa horraanba aad uga carootey inaan roose la siinin De Paul oo kaaga darane 2 daqiiqo ka yar kaddib markii uu dhaawacay De Sciglio misna goolka guusha ka dhaliyay Milan, jeet uu laacibkii uu dhaawacay yaallo garoonka dhiniciisa, isla markaana aan weli la bedelin.
Jawaabaha rasmiga ah ee xadka dhaawaca labada laacib waxaa la ogaan doonaa habeenka Talaadada.
Lucas Ocampos oo ka hadlay kusoo biiristiisa AC Milan + Sawirro
Klopp oo ka hadlay suurogalnimada uu Sadio Mane uga qayb qaadan karo kulanka Chelsea